Marketo na Ahịa Ahịa: Ihe Need Kwesịrị Knowmara | Martech Zone
Marketo na Ahịa Ahịa: Ihe Need Kwesịrị Knowma
Monday, October 10, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Guy Goldstein
Marketo weputara ya Akaụntụ Dabere na Akaụntụ (ABM) modul dị ka akụkụ nke mgbalị na-arịwanye elu iji kwado mmekọrịta azụmahịa. Ọ bụ ezie na ngwá ọrụ n'onwe ya bụ nsụgharị mbụ ma gosipụta nkwa dị ukwuu, enwere ụzọ ụfọdụ nke edobere ABM iji gbanwee azụmaahịa na-amalite iji ikpo okwu. Marketo na-akọwapụta ihe atọ dị iche iche nke azịza ABM ya:
Ikike ịkwado ma jikwaa akaụntụ na ndepụta akaụntụ.
Ikike itinye aka na akaụntụ lekwasịrị anya na ntanetị.
Ikike tụọ mmetụta ị na-enweta na akaụntụ echekwabara.
Marketo si whitepaper na ABM na-enye uru nke ABM iji meziwanye ahịa ROI, na-ebugharị ego a na-enweta, na-eme ka ndị ọzọ na-agbanwe, na-eme ka ndị ọkachamara ruru eru ma na-edozi ahịa na ahịa.
84% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na azum ABM karịrị azụmaahịa azụmaahịa ndị ọzọ dịka ITSMA si kwuo
97% nke ndị na-ere ahịa nwetara ROI dị elu na ABM karịa mmemme ọ bụla ọzọ dị ka Alterra Group
92% nke ndị na-ere ahịa B2B gburugburu ụwa na-atụle ABM oke oke ma ọ bụ dị oke mkpa na mbọ ahịa ha niile dị ka Mkpebi Sirius
208% karịa ego na-enweta site na ahịa na ụlọ ọrụ ndị kwekọrọ na ndị ahịa na ndị otu ahịa dị ka MarketingProfs
Etinye Mkpebi Azụmaahịa
Dika teknụzụ ahia aga n’ihu, ya na nka na mmuta nke ndi okacha amara amara ahia ahia, usoro ndi mmadu nwere ike ichoputa ma mezue ya nke oma aghọwo ihe di mgbagwoju anya. Ndabere ndekọ ndekọ / kọntaktị nwere mpaghara 100 ma ọ bụ karịa, ebe nkezi mmejuputa taa nwere ike ịgụnye 300-500 na-arụ ọrụ arụ ọrụ.
ABM Marketo bu uzo eji eme ka nkenke ihe omuma di iche iche choro banyere ahia ha. Ebumnuche ABM bụ usoro mmalite maka ngwa ahịa nke na-enyekarị ụlọ ọrụ dị mma maka ijikọ na ịlele n'ime ngwa ọrụ mana ọ gbalịsiri ike ịkekọrịta ozi ahụ na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ime mkpebi zuru ezu nke ọma ga-eme ka ụlọ ọrụ nwee ike idozi ya na nhazi ya yana ụlọ ọrụ nwere ike gbanwee ngwa ngwa na ahịa na-agbanwe agbanwe.
Imezi Nkwurịta Okwu
The agha n’etiti ire ahia na ire ahia dika ihe ochie dika oge n’onwe ya. Azụmaahịa Azụmaahịa nyere nkwa nke mkpebi maka esemokwu a na iwebata Onye Isi Nweta Ego - Nrọ nke ihe jikọrọ ọnụ na kwekọọ Sales na Marketing otu na-asụ otu asụsụ ma rụọ ọrụ maka otu ebumnuche.
N'ụzọ dị mwute, nkwa a abụrụla ihe siri ike ịnyefe na oghere teknụzụ ahịa. Companieslọ ọrụ ndị a ghọtara mkpa ọ dị ịhazi na ọbụnadị wee mepụta ngwa ọrụ pụrụ iche maka naanị ebumnuche ahụ, mana ha na-anwa ịdọkpụkwa ahịa na nhazi, Ha hụrụ olulu ahụ.
Asụsụ nke ABM bụ asụsụ Ahịa, kwusara nke ọma na Azụmaahịa.
Ntughari a n'echiche na-ekwe nkwa ime ka mmekorita di ukwuu na-eketa, na ihe mgbaru ọsọ anakwere. ABM Marketo na-ezube ịnye dashboard ejiri, maka mmesapụ aka, nke ihe mgbaru ọsọ.
Ghọta Usoro Meta-Ahịa
Buyingzụ ahịa B2B bụ okirikiri mgbagwoju anya na-emetụtakarị ọtụtụ ndị nwere oke nke ọkwa dị mkpa na ụlọ ọrụ. Usoro ịzụrụ ihe nwere ike ịdị ogologo, usoro a anaghị agbanwe agbanwe. N'agbanyeghị nke a, ụdị kpochapụwo maka Ahịa na ire ahịa metụtara ụlọ ọrụ agbadoro dabere na onye ahụ. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịdabere na ọtụtụ mmadụ, mana ọ dị obere ịchọta ndị nwere ike nyochaa mmekọrịta niile na atụmanya ọ bụla.
Y’oburu n’eji Salesforce mee ihe, ikekwe ina ama okwu dika Mkpebi Mkpebi, Mgbanwe, na onye mmeri - Ndị a niile na-arụ ọrụ dị mkpa n'inyere atụmanya aka ịghọ ndị ahịa, mana nke ọ bụla nwere ọrụ dị iche na ọkwa nke ịdị mkpa dị iche na nke ọzọ.
Ọzọkwa, ọ bụghị ndị a niile ka amatara na sistemụ gị, ma ọ bụrụ na ị na-etinye oge gị niile n'ịgbalị imebi onye na-eme mkpebi na ụlọ ọrụ na-atụ anya ya, ị ga-amụta ngwa ngwa na ha nwere obere oge ohere iji kwenye.
Ebumnuche ABM chọrọ ịgbatị mkparịta ụka ahụ karịa naanị isi mmalite nke kọntaktị, na ọbụnadị naanị ịkọrọ ndị ị matara. Ebumnuche ya bụ ịmepụta asụsụ edo edo maka akụkọ ndekọ aha yana iji soro onye ọ bụla nwere ike ịmata dị ka akụkụ nke akụkọ ndị ahụ.
Ọzọkwa, ụzọ ABM ga-eme ka mpaghara ebe a na-elekwasị anya, ka e wee mee ka ha mata ọrụ ndị dị mkpa metụtara dị obere kọntaktị n'ime akaụntụ atụmanya, na-enye ha nghọta na ọchịchịrị zoro ezo nke usoro ịzụta, yana nghọta dị omimi iji nyere aka mezuo nghọta ahụ.
Ngosipụta: Ihe oyiyi nyere site Marketo.
Tags: abmabm roiabm azumahia dabere na ahịab2bb2b ịzụ okirikirib2b ahịag8 teknụzụahịamarketo abm
Guy bụ onye na-ere ahịa akpaaka na njikwa ọrụ. G8 Teknụzụ na-eji usoro ngwakọ zuru ezu maka ịzụ ahịa ahịa, na-adọta site na ahịa ọdịnala na ahụmịhe ahịa ozi iji nyere ndị ahịa aka inwe ihe ịga nke ọma. Dabere na ahụmịhe na nyocha G8 na-arụkọ ọrụ na ndị ahịa ya iji nye ọfụma, azụmahịa ahaziri ahaziri maka azụmaahịa ndị ahịa ọ bụla.
Etu esi atụ mmekọrịta gị n’ịntanetị n’iru
Ihe mere ihe omuma bu ihe bu isi nke SEO Strategy